Izinhlobo zezinkampani zama-mercantile ongazisungula eSpain | Ezezimali Zomnotho
Kujwayelekile kakhulu ukuthi namuhla sinenhloso yokuvula ibhizinisi, noma ukwenza inkampani ibe semthethweni ngokubambisana nabanye abalingani bebhizinisi. Kepha ukuze senze lolu hlobo lwebhizinisi lube semthethweni kuyadingeka ukuthi senze ukubambisana, kepha Buyini ubambiswano? Futhi yiziphi izinhlobo zemiphakathi ezikhona? Kulesi sihloko sizophendula le mibuzo, ukuze ukwazi ukunquma ukuthi iyiphi indlela engcono ngokuya ngezidingo zakho.
Into yokuqala okufanele icaciswe ukuthi kukhona 4 amathuba ezinkampani eSpain, inkampani yokuqala esizoyihlaziya kuzoba yinkampani enomkhawulo, bese sihlaziya inkampani elinganiselwe, njengenkampani yesithathu sizohlaziya umphakathi ohlangene, futhi ekugcineni sizokhuluma ngobambiswano obulinganiselwe, obaziwa nangokuthi ubambiswano obulinganiselwe.
1 Ikhamphani encane
1.1 Izinzuzo zeStock Company
1.2 Okubi ngenhlangano
2 ISociedad Limitada
2.1 Izinzuzo zezinkampani ezinomkhawulo
2.2 Okubi kokusebenzisana okulinganiselwe
3 ISociedad Colectiva
3.1 Izinzuzo zeNhlangano Ehlanganisiwe
3.2 Okubi kweNhlangano Ebumbene
4 Ubambiswano Olunqunyelwe
4.1 Inzuzo Yobambiswano Olunqunyelwe
4.2 Okubi kokuBambisana Okulinganiselwe
Inkampani ehlangene Ingenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu eSpain, futhi isici sayo esiyinhloko ukuthi inhlokodolobha yenkampani ihlukaniswe ngamasheya, anenani ngalinye, futhi ingadluliselwa ngokukhululekile phakathi kwabanikazi bamasheya ashiwoyo, ngakho-ke ngokuzayo, inani labantu abangabamba iqhaza kule nkampani alinamkhawulo.
Izinzuzo zeStock Company
La inzuzo enkulu yalolu hlobo lwenkampani Kuyiqiniso lokuthi kungaba khona inkululeko yokwenza ukuthengiselana ngamasheya akha inkampani. Yini ekuhambeni kwesikhathi ezovumela inkampani ukuthi ithole abatshalizimali abaningi, futhi ikwazi ngisho nokufakwa ohlwini lwezindawo zokuthengiselana ngamasheya.
La ukungahambi kahle kwalolu hlobo lwenkampani Kuyinkimbinkimbi ukuthi kufanele ikwazi ukuhlanganiswa phambi kweziphathimandla, ngoba idinga amaphepha amaningi. Futhi okunye okubi ukuthi ngeke ukwazi ukulawula ukuthi ngubani othola amasheya enkampani, lokhu kubaluleke kakhulu uma uhlela ukugcina ukuphatha okuhle kwenkampani, ngakolunye uhlangothi, futhi kudinga isakhiwo sokuphatha esiqinile ngenxa yobunzima bayo bokuphathwa kwamasheya, kanye nezinkinga ezibandakanya lokhu, njengokuhanjiswa kwenzuzo.
Elinye iphuzu okufanele ulibheke njengo izidingo zebhizinisi ngukuthi imali edingekayo ephansi engama-euro ayizinkulungwane ezingama-60 iyadingeka ukuze ikwazi ukwenza le nqubo, futhi cabanga nokuthi ama-25% esamba esishiwo kumele akhishwe ngesikhathi kwenziwa inqubo yesenzo somphakathi.
Akungabazeki ukuthi luhlobo lwenkampani olunikeza izinzuzo ezimbalwa uma uhlelo lwethu lukhulisa inkampani, kepha-ke, kufanele kubhekwe ukuthi uhlelo kumele lube namandla ngokwanele ukuze lwazi ukwenza konke ukuphathwa.
Ukubambisana okulinganiselwe Luhlobo lomphakathi oluthandwa ngabaningi, futhi izinzuzo ezinikezwa yilolu hlobo lomphakathi zihambisana kakhulu nezidingo zezinkampani eziningi ezikhona. Okunye okubalula ngakho ukuthi umthwalo womtshalizimali ulinganiselwe enhlokodolobha ayinikele, okuzomnikeza iqhaza enkampanini.
Into ethakazelisa kakhulu ngalolu hlobo lomphakathi ukuthi inkampani yaziwa njengebhizinisi elihlukile kosomabhizinisi, ukuze izikweletu nezibopho zenkampani kube yinto ehlukile ekulinganisweni kwalabo abanesabelo kuyo.
Izinzuzo zezinkampani ezinomkhawulo
Inzuzo yokuqala yalolu hlobo lomphakathi ukuthi ubuncane capital Ukuze ukwazi ukwenza inqubo yokwakha le nkampani, kungama-euro angama-3, inani elincane impela. Ngaphezu kwalokhu, ubuncane bezidingo zobulungu kumuntu ongu-1 kuphela.
Enye ye izinzuzo zalolu hlobo lomphakathi okuwukuthi, uma kukhona ukulahlekelwa kwenkampani, akudingekile ukuthi osomabhizinisi baphendule ngempahla yabo, okuvumela ukuqiniseka okukhulu ekuqondisweni kwezezimali kwenkampani nosomabhizinisi abayenzayo, kunciphise ubungozi bokuthi utshalomali lungasho leli bhizinisi.
Enye ye izinzuzo zokuphatha, Yebo, zombili izinqubo nezidingo zilula kakhulu futhi ziyashesha, ngakho-ke kulula kakhulu uma okudingayo ukuthi siqale ukusebenza ngokushesha.
Odabeni lwentela, amawindi angathulwa anele, okokuqala kufanele sisho ukuthi intela abayikhokhayo ingaphansi kunaleyo yomsebenzi oziqashile, ngakho-ke lokhu sekuvele kuyisiqalo esihle, kepha futhi kungumholo inkampani uqobo ingadonswa njengezindleko zenkampani, okwenza kube nenzuzo enkulu ngokwezimali ukuba nenkampani enomkhawulo yomphakathi.
Okubi kokusebenzisana okulinganiselwe
Okubi kakhulu ngalolu hlobo lwenkampani ukuthi uma inkampani ifuna ukukhula futhi icele imali ethe xaxa kubatshalizimali abaningi, le nqubo ayilula kangako. Ngakho-ke, uma lolu kuyicebo lakho, into ebaluleke kakhulu ukusungula inkampani enomkhawulo.
Ingabe igama lenkampani elifaka igama lomuntu elilandelwa insumansumane ethi “nenkampani” lizwakala lijwayelekile kuwe? ngoba izinkampani ezinalolu hlobo lwamagama ziyi- umphakathi ohlangene.
Isici esiyinhloko salokhu uhlobo lomphakathi kungukuthi kungumphakathi wokuzithengisa onobuntu. Lokhu kusho ukuthi abalingani benkampani ngeke nje benze iminikelo yemali enkampanini, kepha futhi kumele benze imisebenzi yokuphatha futhi banikele ngokwengqondo ekufezeni izinhloso.
Ngenxa yokubamba iqhaza kwabalingani, isimo "sozakwethu" asidluliswa ngendlela elula, kepha sidinga izivumelwano eziningana nochungechunge lwezinqubo.
Kodwa-ke, futhi njengoba sizoxoxa ngokuhamba kwesikhathi, inesici sokuthi i- Isibopho sozakwethu asinamkhawulo, ezimweni ezithile ezingabeka engozini izimpahla zakho.
Izinzuzo zeNhlangano Ehlanganisiwe
Inzuzo enkulu yalolu hlobo lobambiswano ukuthi ophathina bazinikele kakhulu ekunikelweni hhayi kuphela enhlokodolobha ukuze inkampani isebenze, kepha futhi nasekuphathweni ngqo nasekulawulweni kwezinsizakusebenza zenkampani.
Enye inzuzo yalo mphakathi ohlangene ukuthi ayikho imali encane yokuhlanganisa umphakathi walolu hlobo. Izinqubo futhi zilula, ziyashesha futhi ziyasebenza.
Ngenxa yohlobo lwenkampani kungenzeka futhi kulula ukulawula ukufinyelela kozakwethu abasha, okuvumela ukulawula okukhulu kulabo abanokuphazamiseka okuqondile ekusebenzeni kwenkampani.
Kumele kuqashelwe ukuthi, yize kunezinzuzo eziningi, lolu hlobo lomphakathi aluthandwa kakhulu namuhla.
Okubi kweNhlangano Ebumbene
Okubi kakhulu, futhi okudume kakhulu, ukuthi iyinkampani yezikweletu engenamkhawulo, okusho ukuthi abalingani abazuzi nje kuphela ezinzuzweni zenkampani, kodwa futhi banesibopho sokuphendula ngezimpahla zabo esikhathini esibi. yenkampani.
Leli phuzu le- isikweletu esingenamkhawulo Kubaluleke kakhulu ukubheka, ngoba yize izinzuzo zaziwa kakhulu kulolu hlobo lwenkampani, kufanele kucatshangwe umkhawulo othile wokuqiniseka kwenkampani, ngoba ukucacisa inkampani enamathuba aphezulu okulahlekelwa kungabeka ukulingana kwethu njengabalingani engcupheni. amafa.
La Ubambiswano olunomkhawulo luyinhlanganisela yobambiswano olujwayelekile nobambiswano olunqunyelwe, futhi iveza izinzuzo eziningana esingazibheka njengezibaluleke kakhulu lapho sinquma uhlobo lomphakathi esifuna ukuwakha. Ngesikhathi sokwenza lolu hlobo lobambiswano, izinhlobo ezimbili zabalingani zingabonakala.
Iqembu lokuqala lozakwethu esingalikhomba yilabo abanabo isikweletu esingenamkhawuloNgamanye amagama, baphendula ngezimpahla zabo ekusebenzeni kwenkampani, ngakolunye uhlangothi banesibopho esiqondile sokwenza izenzo ezidingekayo ukuze bakwazi ukuphatha izinsiza zenkampani.
Njengohlobo lwesibili lozakwethu, singathola labo umthwalo wabo okhawulelwe engxenyeni yemali enikelwe enkampanini, okungukuthi, indima yabo eyabalingani abanesikweletu esilinganiselwe.
Inzuzo Yobambiswano Olunqunyelwe
Inzuzo enkulu yalolu hlobo lomphakathi ukuthi akukho mali encane edingekayo ukwazi ukwenza ukufakwa kwenkampani. Ngakolunye uhlangothi, sithola inzuzo enikezwa izinkampani ezilinganiselwe zomphakathi, ngoba ukujoyina abalingani abasha kuyinqubo elula impela, inqobo nje uma kuyingxenye yenkampani engaphansi kwalombuso.
Ngokuvumela imali eningi kanye nabalingani abaningi ukuba bangene, ukukhula kwenkampani kungaba kukhulu kakhulu kunezinye izinhlobo zomphakathi, futhi lokhu ngaphandle kwesidingo sokuba abatshalizimali abasha babambe iqhaza ekuphathweni kwenkampani.
Okubi kokuBambisana Okulinganiselwe
Kunezinkinga ezimbili ezinkulu, eyokuqala ukuthi isakhiwo, esisekelwe ezinhlotsheni ezimbili ezihlukene zenkampani, siyinkimbinkimbi kakhulu, ngakho-ke uhlelo lokuphatha ludinga ukuqina ukuze lukwazi ukuphatha izinhlobo ezimbili zabalingani enkampanini eyodwa.
Okubi kwesibili ukuthi ozakwethu abekho ngaphansi kombuso wobudlelwano obulinganiselwe Abanalo ilungelo lokuvotela izinqumo zenkampani, ngoba imisebenzi yokuphatha inikezwe abalingani abalinganiselwe kuphela. Ngaphezu kwalokho, kufanele sicabange ukuthi ubunzima obuzokwazi ukungena ngaphakathi kozakwethu abalinganiselwe buphezulu kakhulu lapho inkampani isivele yakhiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Inqubomgomo yezimali » Izinhlobo zezinkampani ze-mercantile eSpain